Nin Jaceyl dartiis baaskiil ugu socdaalay Qaarada Aasiya ilaa Yurub!! (SAWIRRO) | GURIGA HAWEENKA
Home » Lamaanaha » Nin Jaceyl dartiis baaskiil ugu socdaalay Qaarada Aasiya ilaa Yurub!! (SAWIRRO)
Bishii January 22, sanadkii 1977, 24-jir lagu magacaabo P.K. Mahanandia ayaa safar dhulka ah bushkuleetti ‘Baaskiil’ uga baxay magaalada Delhi ee caasimadda India isaga oo ku tagaya magaalada Boras ee dalka Sweden – si uu ula noolaado marwada uu ogaa inay tahay jeexiisa midig. Sheekadooda jaceyl ee cajiibka ah waxay noqotay mowduuca buuggii loogu iibsiga batay oo uu qoray qoraaga reer Sweden ee Per J. Andersson.
Mahanandia wuxuu si kadis ah kula kulmay Charlotte Von Schedvin sanadkii 1975. Wuxuu sida farshaxamiiste uga shaqeynayay gudaha qasriga Connaught Place oo aheyd meel dukaameysi iyo ganacsi furan oo ku taalla Delhi – Ms. Von Schedvin, oo ka timid Sweden waxay dalxiis ku joogtay Hindiya.
Maalin iyada oo si tamashleyn ah ugu socdaaleysa waddooyinka Delhi, waxay isha ku dhafatay nin farshaxamiiste ah oo ay agtaal boor lagu qoray; “10 daqiiqo ku qaada sawirkaada kuna dhiib 10 Rupees.” Waxayna go’aansatay inay tijaabiso xirfaddiisa.
Waxay ag fariisatay boorkiisa, hayeeshe halkii uu ka xejin lahaa howshiisa wuxuu bilaabay inuu gacmaha ka dhidido – iyada oo la niyad-jaban natiijada sawirka uu ka qaaday, waxay go’aansatay inay maalinta xigta kusoo laabato, balse waxba isma badalin.
Dalxiisadda Swedish-ka ayaa in yar dabadeed baranaysa in P.K. Mahanandi uu sabab muuqata u leeyahay wareerka iyo qamandhacada heysa. Ammintii uu indhaha ku qabtay iyada, wuxuu xusuustay dardaaran ay hooyadiis u sheegtay markii uu kurayga ahaa. Mahanandia wuxuu kamid ahaa beelaha Dalit – beesha ugu liidata bulshadiisa oo takoor kala kulanta kuwa sare ee Hinduuga. Waxay ku siraysatay in uu guursan doono gabar ka timid meel fog; kasoo jeedda qoys caddaan ah. Durbadiiba wuxuu ogaaday in gabadhani tahay middii ay hooyadiis uga sheekeyn jirtay.
Hayeeshe taasi waxay ahayd wixii ugu danbeeyey ee Charlotte ka fikirayay. Iyaduna way ku sii dhawaatay xaggiisa – tiyoo uu su’aalo cilan uu weydiinayay, wuxuu u muuqday daacad taas oo iyadana ku xanbaartay inay u foojignaato ka fikirka xiriirkiisa.
Labaduba waxay si joogta ah u kulmayeen toddobaadyadii xigay, wuxuuna xittaa ula dhaqaaqay dhinaca deegaanka uu kasoo jeedo halkaas oo ay isku guursadeen, marka loo eego qaab dhaqameedka. Cabbaar kadib, waxaa ku timid waqtigii ay asxaabteeda kula laaban laheyd dalkeeda Sweden, waxay seygeeda kaga balan-xiratay inuu ugu imaanayo magaalada warshadaha leh ee Boras. Waxay xittaa isku dayday inay kaga tagto tikidka diyaaradda, hayeeshe isaga oo hal-faanaya ayuu doorbiday inuusan ka guddoomin.
Kadibna waxay iskula socdeen joogto, hayeeshe heerkiisa dhaqaale marna muusan sameynin horumar. Mana uusan awoodin inuu diyaarad u raacdo dalka ay ku sugan tahay afadiisa; mana joogi karin la’aanteed. Wuxuu markaas iska iibiyay dhamaan agabkii u yiillay gurigiisa – isaga oo soo iibsaday baaskiil uu ku maro jidka dheer ee ku xiran cirifka Yurub looga baxo Hindiya.
Wuxuu ka tagay Hindiya bishii January 22, sanadkii 1977 isaga oo maraya dalalka Pakistan, Afghanistan, Iran iyo Turkey ilaa uu ka gaaro Yurub. Mihnaddiisa farshaxanna waxay qeyb ku laheyd socdaalkiisa. Wuxuu inta uu ku jiray safarkiisa sawirro u sameynayay dadka uu la kumo – kuwaas oo iyaguna ugu deeqayay lacag iyo cunto uu jidmar kasii dhigto. In kasta oo uusan garan karin luqadda dalka uu socdaalka ku yahayba, farshaxankiisa ayaa uga dhignaa xiriir uu kula macaamilo dadka uu la kulmo.
“Marka aan daal dareemo ama aan hantaaqmo, waxaan soo xusuustaa wajigii qurxoonaa ee afadayda taas oo iga saacidaysay inaan kusii hal-adkeysto safarkayga,” ayuu yiri.
“Markii ay i aragtay way igu soo boodday; waxaana ku dhahay waan yara shiirayaa, hayeeshe way isku kay nabtay,” ayuu yiri. Waxayna wadajir noqdeen taniyo markaas tiiyoo kala duwanaanta dhaqamada ay caqabad ku aheyd wada noolaanshahooda.
“Maan aqoonin dhaqanka Yurub, fikirna kama heysan xogteeda, laakiin afadayda ayaa igu kaalmeysay inaan la qabsado. Waxaan wali dareemayaa jaceylkii shalay – 1975,” ayuu Mahanandia u sheegay BBC-da.
Previous: Faraantiga Dumarka Geedkooda La galsho ee uurka Ka Hortaga (Vaginale ring) & dumarka Somaliyeed
Next: “Anigoo 23 jir ah godkii la igiu xidhay, baa anigoo 50 jir ah la iga soo saaray”.